Tena fifamofoana ve izany? | Martech Zone
Tena fifamofoana ve izany?
Alakamisy Oktobra Oktobra 3, 2019 Alakamisy Oktobra Oktobra 3, 2019 Douglas Karr
Raha miresaka amin'ny sakaizako 83% bebe kokoa aho amin'ity volana ity noho ny volana lasa, izaho ve izany mpifamofo bebe kokoa? Ahoana raha nanao fanamarihana vitsivitsy momba azy aho? Efa mpifamofo ve aho?
Mazava ny famaritana ny firotsahana:
(1) Fifanarahana ara-dalàna hanambady.
(2) Fandaminana hanao zavatra na handehanana any amin'ny toerana voafaritra.
Merriam Webster Famaritana ny fifandraisana
Over a folo taona lasa izay, Navoakako voalohany ity fihorakorahana ity mba iriko ny tsy hijanonan'ny mpivarotra milaza an'io teny io andraikitra amin'ny maha metrika fandraharahana azy. Androany dia mbola olana eo amin'ny sehatry ny indostrianay io ka narahiko ity sary eto ambany ity.
Ny fotoana refesina amin'ny pejy, isan'ny hevitra, isan'ny mpanaraka, isan'ny isam-bato, na koa ny isan'ny minitra an-tsary jerena dia tsy manampy ny asanao raha tsy azonao atao ny mampifanaraka ny andraikitra amin'ny tena izy valin'ny orinasa. Raha tsy vitanao dia a metric zava-poana.
Mbola mitaraina amin'ny fanararaotana io fe-potoana io aho andraikitra Androany satria mahita vavolombelona be loatra amin'ny mpanjifa mandany vola be amin'ny atiny tsy manome tombony ho an'ny orinasa aho.
Io dia tsy andraikitra, it's mampiaraka. Ary tsy midika izany fa ny mpivarotra dia tsy tokony hanaraka karazana fifandraisana eo amin'ny mpijery, mpanaraka, mpankafy, mpihaino sns ... tokony. Saingy ny mpivarotra dia tsy maintsy mampifanaraka an'io fifandraisana io amin'ny valin'ny orinasa tena izy.
Ny mampiaraka dia hetsika ara-tsosialy ataon'ny, matetika, olona roa miaraka amin'ny tanjon'ny tsirairay hanombatombana ny fahafahan'ny hafa ho mpiara-miasa aminy.
Raha mandany fotoana bebe kokoa amin'ny tranokalanao ireo mpitsidika anao, arahaba tsara! Mihaona bebe kokoa ianao ary famantarana tsara… fa tsy fifamofoana. Rehefa mividy ilay peratra ny mpitsidika anao ka mametraka azy eo amin'ny rantsan-tananao, lazao amiko fa efa mpifamofo ianao. Rehefa mitombo ny isan'ireo mpitsidika ireo ary mividy bebe kokoa amin'ny tranokalanao izy ireo, dia azonao atao ny milaza amiko fa mihabe ny fifandraisanao.
Mpivarotra tsy afaka refesina ny tamberim-bola amin'ny haino aman-jery sosialy Mampiasà teny toy ny firotsahana an-tsehatra mba hamerenany ara-dalàna ny ezaka ataon'izy ireo sy hahalalan'ny mpanjifany… nefa mandany ny volany
Rehefa nanao ny kabary fanokafana i Jeffrey Glueck tamin'ny Konferansa Fikambanana eMarketing folo taona lasa izay, dia nitantara zavatra lehibe iray izy Travelocity manomboka ny fampielezana haino aman-jery sosialy amin'ny fampiasana ny GNOME ary MySpace.
Raha ny fenitra fifamofoana dia fahombiazana lehibe ny fampielezan-kevitra… nakan'ny rehetra ny gnome ary nandeha ny hevitra sy ny resaka! Nandany fotoana bebe kokoa tamin'ny pejy ny olona ary nisy fatra iray taonina. Mampalahelo anefa fa 300 tapitrisa dolara ny fampielezan-kevitra ary tsy fahombiazana tamin'ny fitondrana orinasa mankany Travelocity. Raha lazaina amin'ny teny hafa… tsy misy fifamofoana.
PS: Amin'ny lafiny kely… Misy sakaizako saingy tsy mpivady izahay.
PPS: Misaotra an'i Ablog Cinema tamin'ny famokarana an'ity horonantsary mahavariana ity! Ity no faharoa ao amin'ny Angano, hevi-diso ary famoahana andian-dahatsoratra.
Sidecar: Tetikady fanaovana dokambarotra Amazonin'ny data
Ahoana ny fomba fivarotana Visualization + CPQ amin'ny 3D
Apr 25, 2009 amin'ny 8: 52 AM
Tompoko tsara… Saika nianjera tamin'ny toerako tao amin'ny birao aho rehefa avy namaky ny lohatenin'ity lahatsoratra ity. Tsy maninona ny fifamoivoizana rehefa ela ny ela .. ny varotra no isaina .. Vola. Vola miditra. Vola miditra.
Apr 25, 2009 ao amin'ny 12: PM PM
Miarahaba anao nitondra an'i Stephen an-tsambo. Lehilahy mahafinaritra izy ary faly aho fa niaraka taminareo ry zalahy… Mieritreritra aho fa ho gaga ianareo amin'ny fomba fandavahany sy hamaritana ireo zavatra.
Re: ity. Heveriko fa manan-danja tokoa ny fananganana fifandraisana amin'ireo mpanjifanao sy ny mpanjifanao - ary misy zavatra tena sarotra refesina. Ny iray amin'ireo antony tiako be ny mitoraka bilaogy sy media sosialy dia ny TSY AZoko atao mangarahara, afaka milaza ny marina aho, afaka manome ny sain'ny maro ny mpanjifako - fa indrindra indrindra - fantatro fa mafy daholo ireo zavatra ireo mandrefy aloha dia azo refesina ankehitriny.
Te hihaika fotsiny amin'ireo mpivarotra aho mba hanomezana fantsona hita maso ny mpanjifany izay manome azy ireo porofo fa mitarika any amin'ny b, b to c, ary c to d. Rehefa hitan'ny mpanjifa fa misokatra, manao ny marina ary misy… dia ho tsara kokoa noho izany izy ireo! Mila manaporofo izany fotsiny ho azy ireo isika.
Mahafinaritra ny mahita anao eto! Rahoviana ianao no tonga amin'ny The Bean Cup?
Apr 25, 2009 amin'ny 11: 44 AM
Angamba hiditra amin'ny ady hevitra lehibe isika eto, saingy heveriko fa mendrika hananana izany.
A. Toa hetsika tokana ny fampirafesana ao amin'ny fampitahanao (na farafaharatsiny hetsika iray nateraky ny fividianana fotsiny). Miady hevitra aho fa ny famaritana iray hafa momba ny firosoana dia ny "manintona na mampiditra" olona iray amin'ny resaka na fifandraisana. Ny fifamofoana dia tsy hetsika tokana na fotoana fohy mihitsy aza. Ireo fifandraisana madinidinika izay miafara amin'ny fifandraisana manankarena eo amin'ny orinasa sy ny mpanjifa. Mampihena ny elanelan'izy ireo izany.
B. Ny tsirairay amin'ireo fanehoana ny hoe "fiankinan-doha" tanisainao dia azo isaina ary izaho koa mamaritra azy ireo ho fifamofoana. Izay hizarako ny tsy fisalasalanao dia rehefa samy isaina ho azy ireo tsirairay ireo fomba fiteny ireo. Ny olona iray mamela ny heviny fotsiny dia tsy midika hoe manakaiky kokoa izy ireo amin'ny fandraisana andraikitra nofaritana toy ny fanaovana fividianana. Ny hetsika fifamofoana dia tokony hivoatra amin'ny vokatra farany tadiavin'ny orinasa iray. Ny marketing dia tsy maintsy mameno ity làlana ity (matetika tsy an-dàlana). Ohatra, raha tsy nahomby ny Travelocity dia namorona fanentanana fanentanana mangatsiatsiaka fotsiny nefa tsy nieritreritra ny fomba hampiasan'ny mpanjifa tsirairay ny tanjony farany.
C. Raha te hiara-hiasa amin'ny fampitahanao izahay… Tsy mino aho fa ny orinasa dia samy mahazo peratra avy amin'ny mpanjifany avokoa. Ny orinasa dia tsy maintsy manambola mpanjifa tsy tapaka, mampiditra azy ireo, manangana fifandraisana vaovao amin'izy ireo. Raha misy orinasa mieritreritra fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpivady izy ireo tamin'ny farany, dia ho gaga izy ireo fa haingana be ny fisaraham-panambadiana eo amin'ny sarin'izy ireo.
Miala tsiny amin'ny fanehoan-kevitra lava be, saingy mino aho fa ny firotsahana dia metrika tena ilaina amin'ny marketing ary azo haorina amin'ny fomba mandaitra kokoa. Fomba fijery hafa fotsiny.
Hevitra tsara sy resaka tsara. Ao anatin'ny hevitrao, hanohitra ny hevitra aho fa ny iray amin'ireo hetsika ireo dia 'mitarika' amin'ny fifandraisana ara-bola. Asehoy ahy ny fantsom-pivarotana orinasa tokana izay manome porofo fa ny fomba voalohany fampidirana ny olona hividy amin'ny orinasanao dia manomboka amin'ny fanehoan-kevitr'izy ireo ao amin'ny bilaoginao… na hoe misy fifandraisana misy eo amin'ny isan'ireo mpanaraka anao sy ny tetibolanao amin'ny varotra ankapobeny.
Heveriko fa ny fahasosorako dia mitoetra amin'ny hoe mino ny olona fa lasa karazana fampisehoana pseudo fampisehoana ho an'ny orinasa io. Amin'ny maha mpivarotra ahy dia mila manome EVIDENS sy angona fanadihadiana izay mampiseho ny antony sy ny vokadratsy misy eo amin'ireo zavatra ireo sy ny tena fividianana aho. Hatramin'izao dia heveriko fa bs
Apr 25, 2009 ao amin'ny 7: PM PM
Doug, fampitahana tsara ity, ary ekeko fa ny fampiasana 'fianarako' dia ampiasaina be loatra ary lany andro. Amin'ny farany, ny mpivarotra dia mila mifantoka amin'izay mitondra ny orinasa ary mitondra ny olona matotra amin'ny famoahana ny volany ho an'ny vokatrao sy ny serivisinao. -Michael